सिएनएन/ तपाईंलाई थाहा छ संसारमै सबभन्दा छिटो उड्ने विमान कुन हो? सबभन्दा लामो दुरी उड्ने नि? वा, सबभन्दा धेरै उचाइमा उडेको विमान?
यो विमान भर्खरै बनेको वा भविष्यमा बन्नेवाला होइन, ५५ वर्षअघि अमेरिकाको 'लकहिड' कम्पनीको 'स्क‌ंक वर्क्स' विभागले बनाएको हो।
यस्तो महत्वाकांक्षी मेसिन डिजाइन गर्ने जिम्मा त्यो बेलाका सबैभन्दा राम्रा विमान डिजाइनरमध्येका क्लारेन्स 'कैली' जोन्सनले पाए। क्लारेन्स र उनका इञ्जिनियरको टोलीले स्क‌ंक वर्क्स विभागमार्फत् यो काम गरेका थिए।